Register Home»Zimbabwe»Australia: Refugee Review Tribunal»Asylum-seekers
GO Showing 1-4 of 4 results Zimbabwe: 1. Please provide an update on the latest situation in Zimbabwe in respect to the treatment of MDC members and supporters by the ruling ZANU PF party members and militia. 2. Please provide background information on the Border Gezi and in particular its level of recruitment activity amongst school leavers in 2007, and its level of activity now. 3. Is there any information that doctors in Zimbabwe are afraid to treat MDC supporters? 4. Is there any information to support, or to rebut, the claim that family members would be punished for the political crimes of MDC activists whom the ZANU PF and militia accuse of being traitors to Zimbabwe? 5. Is there any information to suggest that returnees to Zimbabwe from Australia would be considered as people who have sent money to the MDC to continue its anti-government activities? 6. Is there any information that the ZANU PF would make accusations that family members of MDC activists came to Australia to receive military training? 7. Please provide information on whether ZANU PF target people who have left Zimbabwe for long periods of time and they consider such people traitors